Calculating sisin-dalana ny isan'ny tanimanga.
Calculating ny isan'ny paving slabs.
Track halavan'ny A
Track sakan'ny B
Ny isan'ny taila isaky ny 1 m2 C
Lalina fanariam H
Ny vidin'ny asa
Work 1 metatra2
Calculating ny isan'ny mivaingana paving slabs, pavers
Mamaritra ireo lafiny takiana amin'ny metatra
A - Ny halavan'ny ny lalana.
B - Ilay lalana izay antenain sakany.
C - Isan'ny paving slabs amin'ny 1 metatra toradroa.
H - Lalina ny fanariana ny tanimanga eo ambany. Tsy ilaina.
Noho izany, ny fandaharana dia hanao kajy ny faritry ny lalana, na ny toerana, ny takiana isan'ny taila na pavers, ny habetsahan'ny-bodin'ny ambanin'ny tanimanga, ny vidin'ny asa sy ny fametrahan ny faritra ny iray tanimanga.
Ny tetika ny fametrahan paving slabs
Ny sary dia niteraka tokotokony ara tetika ny fametrahan pavers na mahitsizoro paving slabs.
Ny tetika omena ho an'ny sary lazainy mikasika ny fametrahan sady niteti-taila.
Izany dia hanampy mba hamantarana ny fomba fametrahan lalana na lampivato.
Raha mamaritra ny halalin'ny fanariam, dia hanao kajy ny fandaharana ny boky. Ny kajy ny habetsaky ny fitaovana ho an'ny fasika na azo tsapain-tànana fototra.
Ny endriny, ny habeny, ny teknolojia, ary ny isan'ny fametrahan taila isaky ny metatra tora-maso amin'ny mpanamboatra.